The Irrawaddy's Blog: မျိုးစောင့်ဥပဒေ ပြဌာန်းရေး ရဟန်းသံဃာနဲ့ သက်ဆိုင်သလား
အမျိုးသားရေးဝါဒ နဲ့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒဟာ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်ပါတယ်။
ဥပမာ - ဂေါတမဗုဒ္ဓ နဲ့ ရှင်ဒေ၀ဒတ္တ တုို့ဟာ သာကီဝင်မင်းမျိုးမှ ဆင်းသက်လာသူများ ဖြစ်ကြပြီး ဝမ်းကွဲ ညီအကုိုလည်း တော်စပ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်က အဂ္ဂသာဝကနှစ်ပါးကုို ရွေးချယ်ရာမှာ ရှင်ဒေဝဒတ်ကုို မရွေးချယ်ဘဲ ဗြဟ္မဏအနွယ်မှ လာတဲ့ ရှင်သာရိပုတ္တရာ နဲ့ ရှင်မောဂ္ဂလာန် တုို့ကို သာ
ဓာတ်ပုံ- Andrea Pistolesi
မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ အမျိုးအနွယ်ကုို မကြည့်ပါဘူး။ သီလ သမာဓိ ပညာ ဆုိုတဲ့ အရည်အချင်းကုိုသာ ကြည့်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်မှာ အမျိုးမာန် အမျိုးစွဲ ထားဖို့ ဟောခဲ့တဲ့ တရား မပါဝင်ပါဘူး။
ရုပ်နာမ် ပရမတ်ကုို ထွင်းဖေါက်မြင်တော်မူတဲ့ ဘုရားရှင်အနေဖြင့် အဝိဇ္ဇာဖုံးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါ ပညတ် အမြင် အပေါ် အခြေခံတဲ့ လူမျိုးစွဲ ဘာသာစွဲကုို ဟောရန် အကြောင်းမရှိပါဘူး။
အစွဲဆုိုတာ တဏှာလောဘပါ။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ တရားတော်ဟာ တဏှာကင်းရာ ကုန်ရာကုို ကျင့်ဖုို့
ဟောတော် မူခဲ့တဲ့ တရားတော်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
တဏှာပွားကြောင်းကုို ဖြစ်စေမယ့် မည်သည့်အစွဲကုိုမျှ မြတ်စွာဘုရား အားပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြတ်စွာ ဘုရား က သူ့ရဲ့ သာကီဝင် မင်းမျိုးအတွက်ကုိုသာ ရည်ရွယ်ပြီး တရားဟောခဲ့တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
မြတ်စွာဘုရားက (၃၁) ဘုံမှာ ရှိကြတဲ့ သတ္တဝါအားလုံးအတွက် တရားဟောခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓရဲ့ ၀ါဒ က လူမျိုးတမျိုးတည်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆုိုတဲ့ ဘာသာတခုတည်းနဲ့သာ သက်ဆုိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဝါဒက သတ္တဝါအားလုံးနဲ့ သက်ဆုိုင်တဲ့ ဝါဒပါ။
အမျိုးသားရေးဝါဒကတော့ လူမျိုးတမျိုးနဲ့သာ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ နဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒကုို မရောထွေး သင့်ပါဘူး။
အမျိုးသားရေးဝါဒ စွဲကုိုင်ခြင်းဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့ အလုိုတော် ဟုတ်သလား မဟုတ်ဘူးလား ဆုိုတာကုို ခုဒ္ဒကနိကာယ်လာ ဝသလသုတ္တန်မှာ ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်နုိုင်ပါတယ်။
ဝသလသုတ္တန်ကုို မြတ်စွာဘုရားရှင် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးနေတော်မူစဉ် မြို့ထဲသုို့ ဆွမ်းခံ ကြွလာတော်မူတဲ့ ဘုရားရှင်ကုို အမျိုးဇာတ်ကြောင့် မာန်မာန ထောင်လွှားနေတဲ့ အဂ္ဂိကဘာရဒွါဇ
ဗြဟ္မဏရဲ့ ရဟန်းယုတ် ဦးပြည်းယုတ် သူယုတ်မာ စသည်ဖြင့် ရုိုင်းစုိုင်း ကြမ်းတမ်းစွာ ခေါ်ဝေါ် ပြောဆုိုမှုကုို အကြောင်းပြုပြီး ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။
သာဝတ္ထိပြည် တည်ရှိရာ အိန္ဒိယနုိုင်ငံဟာ ရှေးယခင်မှ စပြီး ယနေ့တုိုင်အောင် ဇာတ်ခွဲခြားမှုစနစ် အား
ကောင်းပြီး အမျိုးသားရေးဝါဒ အလွန် ပြင်းထန်တဲ့ နုိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝသလသုတ္တန်မှ အောက်ပါ ဂါထာ နှစ်ဂါထာကုို ထုတ်နှုတ် ဖေါ်ပြလုိုပါတယ်။
ကောဓနော ဥပနာဘိ စ၊ ပါပမက္ခီ စ ယော နရော ဝိပန္နဒိဋ္ဌိ မာယာဝီ၊ တံ ဇညာ ဝသလော ဣတိ “အကြင်သူသည် အမျက် ထွက်လေ့ ရှိ၏၊ ရန်ငြိုးဖွဲ့တတ်၏၊ ယုတ်မာသည်ဖြစ်၍ သူ့ကျေးဇူးကို ချေဖျက် တတ်၏၊ အယူပျက်စီးသူ ဖြစ်၏၊ လှည့် ပတ် တတ်၏၊ ထိုသူကို သူယုတ်မာဟူ၍ သိရာ၏” န ဇစ္စာ ဝသလော ဟောတိ၊ န ဇစ္စာ ဟောတိ ဗြဟ္မဏော ကမ္မုနာ ဝသလော ဟောတိ၊ ကမ္မုနာ ဟောတိ
ဗြဟ္မဏော “အမျိုးဇာတ်ကြောင့် သူယုတ်မာ မဖြစ်နိုင်၊ အမျိုးဇာတ်ကြောင့် ဗြာဟ္မဏ မဖြစ်နိုင်၊ မိမိပြုသော အမှုကြောင့်သာလျှင် သူယုတ်မာ ဖြစ်ရ၏၊ မိမိပြုသော အမှုကြောင့် သာလျှင် ဗြာဟ္မဏ ဖြစ်ရ၏”
ဒေသနာအဆုံးမှာ အဂ္ဂိကဘာရဒွါဇဗြဟ္မဏဟာ မြတ်စွာဘုရားကုို လေးစားကြည်ညိတဲ့ ဥပါသကာ ဒါယကာတယောက် ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓအဆုံးအမကုို မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်သဘောပေါက်တဲ့ ဘုရားသားတော်ဆုိုပါက ပြင်းထန်တဲ့ လူမျိုး ဘာသာ အယူဝါဒကုို လက်ခံကျင့်သုံးရန် သင့် မသင့် လေးနက်စွာ ပြန်လည် ဆင်ခြင် စဉ်းစားသင့်ပါ တယ်။
ပြင်းထန်တဲ့ လူမျိုး ဘာသာ အယူဝါဒမှ တဖက်စွန်း အမျိုးသားရေးဝါဒကုို ဦးတည်သွားနုိုင်တဲ့ အန္တရာယ် ရှိပါတယ်။ အန္တရာယ်ရဲ့ ခါးသီးတဲ့ အရသာကုို မကြာလှသေးတဲ့ ကာလတွေမှာ အပြစ်မဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ ခံစားခဲ့ရပြီးပါပြီ။
ပြင်းထန်တဲ့ လူမျိုး ဘာသာဝါဒဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ကောင်းကျိုး ဖြစ်စေသလား။ ဆုိုးကျိုး ဖြစ်စေ သလား ဆုိုတာ ကမ္ဘာ့သမုိုင်းမှာလည်း သက်သေ ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
ယခုလည်း ဆီးရီးယား အီရတ် နုိုက်ဂျီးရီးယား စတဲ့ နုိုင်ငံတွေမှာ အပြစ်မဲ့ သာမာန်ပြည်သူတွေဟာ ပြင်းထန် တဲ့ လူမျိုး ဘာသာ အယူဝါဒရဲ့ သားကောင်ဘဝကုို ကျရောက်နေကြရတဲ့ သတင်းတွေကုို နေ့စဉ်လုိုလုို
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့ တရားတော်ကုို လူမျိုးစွဲ ဘာသာစွဲ ဆုိုတဲ့ တဏှာအစွဲနဲ့ အရောင် ဆုိုးတဲ့ လုပ်ရပ်မှန်သမျှဟာ မဖြစ်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ။ မေတ္တာ ကရုဏာ မုဒိတာ ဥပေက္ခာ ဆုိုတဲ့
ဗြဟ္မဇုိုရ်တရားရဲ့ ပြယုဂ်ဖြစ်တဲ့ မွန်မြတ်သန့်စင်တဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားရာ နုိုင်ငံတနုိုင်ငံဖြစ်ပါလျှက်နဲ့ မငြိမ်းချမ်းနုိုင်တဲ့ နိုင်ငံ၊ ကမ္ဘာမှာ အဆင်းရဲဆုံး အမွဲတေဆုံး နုိုင်ငံ ဖြစ်နေရခြင်းရဲ့ အဓိက တရားခံဟာ အာဏာရှင်တုို့ရဲ့ အာဏာအပေါ် တပ်မက်စွဲလမ်းတဲ့ တဏှာဥပါဒါန် အစွဲကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာကုို မစွန့်နုိုင် ဖြစ်နေကြတဲ့ စစ်အာဏာရှင် မျိုးဆက် ဗုိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကုို အာဏာအပေါ် တပ်မက်
မော တဲ့ တဏှာကုို စွန့်ဖုို့ ဟောပြော ပြသ ဆုိုဆုံးမခြင်းသည်သာလျှင် သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရှင်ရဟန်းများရဲ့ တာဝန် ဖြစ်ပါတယ်။
ထုိုတာဝန်ကုို ထမ်းဆောင်ခြင်းဟာ လက်ရှိ မြန်မာ့နုိုင်ငံ အရေးအတွက် အလုိုအပ်ဆုံးနဲ့ အရေးအကြီးဆုံး လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအမျိုးသမီးများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ပြဌာန်းဖုို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေ ဆုိုတာ သူတုို့အတွက် လုို မလို၊ အဓိက ကျ မကျ ဆုိုတာ စနစ်တကျ လေ့လာသုံးသပ်ဖုို့ လုိုအပ်မယ် ထင်ပါတယ်။
ခေတ်ပညာတတ် ဘွဲ့ရတွေတောင် ပါဝင်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်များဟာ ဘာ့ကြောင့် ဟောင်ကောင်ကုို သွားပြီး အိမ်ဖေါ်လုပ်နေကြရပါသလဲ။
မြန်မာအမျိုးသမီးငယ် အများစု ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အဓိက ပြဿနာက ဘာလဲ ဆုိုတာ အရိပ်အမြွက်မျှ သိချင် ရင် အထည်ချုပ်စက်ရုံ တရုံလောက်ကုိုပဲ သွားကြည့်လုိုက်ရင် အဖြေပေါ်မယ် ထင်ပါတယ်။
သူတုို့အတွက် မျိုးစောင့်ဥပဒေ လုို မလို ဆုိုတာ သူတုို့အနေနဲ့ စဉ်းစားဖုို့ အချိန်ရကြမယ် မထင်ပါဘူး။
မြန်မာနုိုင်ငံမှာ ပရိယတ်နဲ့ ပဋိပတ်အလုပ်ကုိုသာ အားထုတ်နေတော်မူကြတဲ့ ဆရာတော် သံဃာတော် များစွာ ရှိကြပါတယ်။
ထိုဆရာတော် သံဃာတော်များဟာ ရဟန်းသဃာများနဲ့ လားလားမျှ မသက်ဆုိုင်တဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေ ဆုိုတာကုို မကြိုက်ပေမယ့် ရှုတ်ရှုတ်ရှက်ရှက် ကိစ္စတွေမှာ ဝင်မပါချင်ဘဲ ကင်းကင်းရှင်းရှင်း နေတော်မူ လုိုတာကြောင့် ဒီကိစ္စအပေါ်မှာ တခွန်းတပါဒမျှ မ်ိန့်ကြားမှု မပြုကြတာပါ။
မျိုးစောင့်ဥပဒေအတွက် သဲသဲမဲမဲ ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ ရဟန်းသံဃာ တချို့ကုို မြင်ရတော့ နူရာဝဲစွဲ လဲရာ သူခုိုးထောင်း ဆုိုသလုို မငြိမ်းချမ်းနုိုင်တဲ့ နုိုင်ငံကုို ပုိုပြီး မငြိမ်းချမ်းအောင်၊ ဆင်းရဲတွင်း နက်ပြီးသား နုိုင်ငံကုို ဆင်းရဲတွင်း နက်သထက် နက်အောင် တွန်းပုို့နေသလုိုပါပဲ။
မျိုးစောင့်ဥပဒေဆုိုတာ ထုိုင်ခုံမြဲရေး ပဓာနတရား လက်ကုိုင်ထားကြတဲ့ စစ်အာဏာရှင် မျိုးဆက်အတွက်
တော့ အကြိုက်တွေ့မယ့် ဥပဒေဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။
Posted in: Eaint Than Zin , သူ့အတွေး သူ့အမြင်
အရှင်စန္ဒိမာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒေါ်စုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဦး ဝီရသူပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊
အားလုံး ကိုချင့်ယုံရုံမှတပါးအခြာမရှိ။ မျိုးစောက်ဥပဒေသည် ဗုဒ္ဓအဆုံးအမ အကြောင်းဆွေးနွေးနေသည်မဟုတ်၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးနေခြင်းသာဖြစ်၏
အရှင်စန္ဒိမာ မှ အတည်ယူရမည်
ဦဒဝီရသူဆိုလျှင် ပယ်ရမည် ဟု မည်သူတဦးတယောက်မှပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါ (လူ။ဘုန်းကြီး အားလုံးအပါအဝင်)။
မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ဘာသာခြားနဲ့ လက်ထပ်လို့ သာသနာ ဆုတ်ယုတ်မှုရှိတဲ့ ပမာဏဟာ မဆိုစလောက်ပါ။
~ ကုလားမြင်ရင် ဘာလုပ်မယ် .... မောင်းထုတ်ရမယ် ...
~ ကုလားမြင်ရင် ဘာလုပ်မယ် .... မောင်းထုတ်ရမယ်...
အစရှိသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းခါင်းစဉ်နဲ့ မိုက်ရူးရဲစရိုက်များ ရိုက်သွင်းနေခြင်းကသာ ဘာသာသာသနာကို အမှန်တကယ် ညိုနွမ်းစေပြီး လူငယ်တွေကို အုံလိုက်ကျင်းလိုက် သာသနာပြင်ပ ရောက်ရှိစေပါလိမ့်မယ်။
သာသနာကို ကာကွယ်နေတယ်လို့ ဆိုတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင် ဓမ္မမှတ်ကျောက်နဲ့ တိုင်းတာရင် သာသနာပြင်ပါကို ရောက်ရှိနေပါပြီ။
May 10, 2014 at 4:46 AM
အမျိုးသမီး အမျိုးသား စည်းမစောင့်ရင် ဘာသာကော လူမျိုး ပါပျောက်တော့မည်။ နိုင်ငံရေးတွေ ပြောမနေကြဘဲ ကိုယ့်နှမ ကိုယ့်သမီး ကိုယ့်သား မွတ်နဲ့ပေးစားနိုင်ကြမလား စဉ်းစား ကြပါ။ကိုယ်က မြန်မာတိုင်းရင်းသားစစ်စစ်ဆိုရင်ပေါ့။
U Wira Thu said that he is doing National Politics so he is not teaching Buddha's way to Nirvana at all and it is not is objective either . It is very clear. U Wira Thu is not teaching violence means but point out the real danger and facts of current demographics situation of Myanmar.
U Wira Thu is doing (with လူဗိန်းစကား) villain in Politics which none of Politicians take risk to do under the current situation.
Those who are so busy with constitutional changes are just for getting into Power and wining the majority seats in upcoming Elections which is the least important thing under the current political situation.
Those who are pointing out the real danger and urgent cases such as Rakhine case, Muslim-Buddhist conflict, farmers affair are doing the real politics.
Moreover U Wira Thu can not vote asamonk. U Wira Thu could not be elected person like Daw Aung San Suu Kyi. So it crystal clear that he is not doing for his personal advantage at all.
But people need to read, learn and if we think that those that are beneficial for the nation and people (we), should support even if the main opposition disagree and urge us not to support.
If we think that those things are not beneficial for the nation and people (we) , then reject.
The main opposition does not represent "democracy" nor they are not "democracy".
Democracy has to be built by people and nation.
We, people who must decide who should lead our nation and people.